Ho avy sy hitosaka ny «s…» | NewsMada
Ho avy sy hitosaka ny «s…»
Par Taratra sur 06/12/2016
Nanakoako, tsy eto Madagasikara irery ihany fa manerana ny vazantany efatra, ny naha voahosotra ho tompondaka eran-tany amin’ny tsipy kanetibe ny Malagasy. Niresaka izany avokoa, indrindra ireo haino aman-jery sy ny gazety any ivelany. Takon’iny vokatra tsara iny indray aloha izany ny endrika ratsy nampalaza an’i Gasikara.
Nodinganin’iny ihany koa ny resaka politika ary hadino ny ngidin’ny fiainana, eny fa na vetivety ihany aza. Ny azo antoka aloha, ny fihazakazak’ireo mpitondra sy ireo mpanao politika ary fikambanana samihafa hanolotra lelavola ho an’ireto maherifon’ny firenena.
Inoana fa hitobaka be mihitsy mandritra ity herinandro ity, ny “s” na ny “sôsy”, teny ilazana ny vola. Ho feno “s” araka izany, ny paosin’ireo mpilalao, noho izao fampiakarana avo ny lazan’ny firenena izao. Hiaraka amin’ny “s” koa ireo teny sy fampanantenana maroloko.
Tsy maintsy ho heno ny hoe :”hokarakaraina ianareo mpilalao, hampidirina hiasa izay tsy manana izany, omena kianja manokana ny tarana tsipy kanetibe, homena trano tsirairay ary hotolorana fiarakodia ireo mpilalao sy ny mpanazatra. Jerena manokana ny sata mifehy ny atleta”, sy ny sisa tsy ho voatanisa.
Fotoana fisehosehon’ny mpitondra sy ireo mpilalao politika ny fotoana toy izao. Eo no hanaovan’izy ireo fitaovana ny atleta sy ny fanatanjahantena. Tsy hita nefa izy ireo tamin’ny fotoana niomanan’ny ekipam-pirenena izay tena nitady tohana. Tratra ny tanjona izao, ho avy hibosesika izy ireo.
Tokony ho tsapan-dry zalahy anefa ireny horakoraka tsy fankasitrahana nahazo azy ireo tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ireny. Na izany aza, aleo alaina ny “s”-ny. Ho avy rahateo ny fety ka samia hahita “s” avokoa.